Androany i Nikaragoa dia miasa amin'ny 80% ihany amin'ny fanavaozana | Fanavaozana maintso
Tomàs Bigordà | | Biomassa, Herin'ny rivotra, Angovo geothermal, angovo hydraulic, Angovo Solar Photovoltaic, Angovo azo havaozina
Ny famokarana herinaratra misy loharano azo havaozina ao Nikaragoà dia manodidina ny 53% amin'ny fitambarany, saingy amin'ity taona ity, hoy ny minisitry ny angovo sy ny harena ankibon'ny tany (MEN) Salvador Mansell, dia misy andro maromaro izay namatsy ireo tambajotra ireo loharano ireo Hatramin'ny 84% ny angovo ampiasaina amin'ny firenena.
Midika izany, raha ny filazan'ny governemanta, ny hery anaty lehibe ananan'ny firenena angovo madio. Naneho ny heviny ny minisitry ny MEN fa amam-bolana toa ny volana novambra, aprily na martsa, rehefa misy rivotra mahery ny firenena, dia miasa 100% avokoa ny fiompiana rivotra, ankoatry ny fandraisana anjaran'ireo zavamaniry mpamokatra herinaratra, dia mahatratra 84% eo ho eo ny famokarana miaraka amin'ireo loharano azo havaozina.
Nanampy i Mansell fa "Rehefa tsara ny fepetra ahafahan'ny loharanom-baovao azo havaozina dia atao laharam-pahamehana amin'ny fiasa isan'andro ny rafitra ary zava-dehibe amin'ny fitantanana tsena. Ao amin'ny firenena no anararaotanay ny harena voajanahary ”.
Raha ny marina dia tsy nanilika i Mansell fa amin'ity taona ity dia misy andro ahafahana manatratra ny fiakarana mihoatra ny 85% amin'ny taranaka misy loharano madio, na dia nanizingizina aza izy fa maro no tokony hihaona. toe-piainana toetr'andro hahatratrarana an'io firaketana vaovao io. Ankoatr'izay, tamin'ny taona 2017 dia nisy orinasa vaovao 12 megawatt izay notokanana tamin'ny sehatry ny Puerto Sandino.
Araka ny filazan'ny governemanta: "Manana taranaka hafanana isika, saingy ny fanohanana, raha misy ny olana, rehefa tsy misy rivotra, tsy misy ny orana, misy ny olana amin'ny masoandro, avy eo manana ny thermal backup hanohy ny serivisy angovo ho an'ny mponina ”.
Nakatona tamin'ny 2016% ny 53 taranaka milamina miaraka amin'ny loharanom-baovao azo havaozina ary ny tanjon'ny andrim-panjakana dia ny hampitombo io isa io.
1 Fanovozan-kevitra manerantany
2 Rivotra angovo any Nikaragoà
3 Fahasamihafana loharano
4 Fampiasam-bola avy any ivelany
Raha ny marina dia mitohy ho ohatra amin'ny famokarana herinaratra miaraka amin'ireo loharano azo havaozina i Nikaragoà. Vao tsy ela akory izay, ny fototra The Project Reality Project - natsangana tamin'ny 2006 avy amin'ny filoha lefitra amerikana taloha, Al Gore - dia nanaiky ny firenena ho amin'ireo firenena telo, miaraka amin'i Suède sy Costa Rica, izay mametraka ny làlana hanarahana an'ity sehatra ity manerantany, izay no fomba lehibe indrindra hampihenana ny famoahana entona entona.
Ary tsy ho an'ny ambany. Ny 27.5% izay nisolo tena ny famokarana angovo azo havaozina tamin'ny taona 2007, dia lasa 52% tamin'ny 2014, ary 53% tamin'ny 2016. Ny tanjon'ny governemanta dia ny hahatratra 90% amin'ny taona 2020, miaraka amina tetikasa fampiasam-bola ho an'ny daholobe, tsy miankina ary mifangaro. Teo anelanelan'ny 2007 sy 2013 fotsiny, ny tetik'asa rivotra, biomass, hydroelectric ary solar dia namatsy 180 megawatt fanampiny ho an'ny tariby fizarana herinaratra nasionaly, izay mitaky 550 megawatts isan'andro.
Rivotra angovo any Nikaragoà
Araka ny voalaza etsy ambony, ny National Interconnected System (SIN) dia nanoratra fa tamin'ny 2016, ny isan-jaton'ny famokarana herinaratra manana loharano azo havaozina dia nahatratra 53%. ny orinasa mpamokatra herinaratra izy ireo dia solontenan'ny 31%, zavamaniry geothermal 28.6%, zavamaniry hydroelectric 26.8% ary famokarana fary 13.6%.
Raha ny angovo avy amin'ny rivotra, ny tetikasa be solontena indrindra ao amin'ny firenena dia ny Amayo I sy II miorina ao amin'ny departemantan'i Rivas ary tarihin'ny consortium kanadianina Amayo SA, izay mamokatra 63 megawatt eo ho eo
Tamin'ity taona ity, ny fandraisana anjaran'ny zavamaniry photovoltaic izay any Puerto Sandino, amin'izao fotoana izao dia izy irery ihany no mamokatra angovo avy amin'ny masoandro ho an'ny tamba-jotra fizarana ny firenena.
Raha ny marina, ny angovo avy amin'ny masoandro dia tena misy ao amin'ny firenena, fa bebe kokoa ho an'ny taranaka iray.
Amin'ny faran'ity taona ity, mikendry ny hahatratra ny rakotra herinaratra 94% ao amin'ny faritany nasionaly ny governemanta. "Miorina amin'ny drafitra sy ny dingana novolavolaina, ny tanjontsika dia ny hahatratra ny fitomboan'ny herinaratra 2021% amin'ny 99," hoy i Mansell.
Ny firenena dia manana macroproject hydroelectric Tumarín, izay eo an-dàlam-pandrosoana any atsimon'ny Karaiba any Nicaragua, araka ny vinavina hanome 253 megawatt, raha vao manomboka ny asany amin'ny faran'ny taona 2019.
César Zamora, mpitantana ny firenena ao amin'ny orinasa angovo IC Power, dia nanasongadina fa ny fahavononan'i Nikaragoa madio herinaratra nipoitra ho vahaolana amin'ny krizy an'ny tsy fahampian'ny herinaratra efa niainan'ny firenena talohan'ny 2007.
"Ny lalàna momba ny fampiroboroboana ny famokarana herinaratra miaraka amin'ny loharanom-baovao azo havaozina dia natolotray ary tamin'ny governemanta vaovao (2007, Daniel Ortega) dia nanomboka fifanakalozan-kevitra tamin'ny solontenan'ny sehatry ny angovo sy ny Cosep (Conseil Superior an'ny Orinasam-panjakana) mba handrafetana ny fomba hivoahana amin'ny izany krizy izany », hoy izy nampatsiahy.
Nilaza i Zamora fa azo atao ny mampiditra herinaratra 180 megawatt ao anaty tamba-jotra, 70 megawatt an'ny angovo geothermal avy ao amin'ny San Jacinto-Tizate complex, herinaratra elektrika herinaratra 50 megawatt avy amin'ireo tetikasa ireo Larreynaga (fanjakana), Hidropantasma ary El Diamante, izay niasa tamin'ny volana desambra lasa teo, raha tany biomassa Zavamaniry iray misy motera 30 megawatt sy ny fikosoham-bary any Santa Rosa sy San Antonio, miaraka amina 80 megawatt eo anelanelan'ny roa.
Fampiasam-bola avy any ivelany
Ho an'i Jahosca López, mpandrindra ny biraon'ny Fikambanana Nohavaozina Nikaragoana, ny firoboroboan'ny firenena amin'ity sehatra ity dia noho ny politika naroson'ny governemanta hamporisihana azy fampiasam-bola nasionaly sy avy any ivelany, manokana ny lalàna momba ny fampiroboroboana ny herinaratra misy loharano azo havaozina.
Tamin'ny volana Jona 2015, voalaza io lalàna io dia novaina nataon'ny Antenimieram-pirenena mba hanitarana ny fandrisihana ho an'ireo tetikasa angovo azo havaozina vaovao mandritra ny telo taona.
Ny iray amin'ireo adihevitra nomen'ny mpanao lalàna tamin'io fotoana io dia ny hoe rehefa manova ny firenena ny matrik'angovo ao aminy mihena ny vidin'ny herinaratra.
Nasongadin'ny mpandrindra ihany koa fa nisy fiantraikany teo amin'ny fampandrosoana teknolojia, izay namela ny famolavolana sy ny fanatanterahana tetikasa ao a mahomby kokoa, ankoatry ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ara-tsosialin'ny vondrom-piarahamonina sasany mifantoka amin'ny tontolo iainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny havaozina dia mamatsy mihoatra ny 80% ny angovo any Nikaragoà
Ny antony sy ny vokatry ny fahalotoan'ny tany